iPhone Chipo Pfungwa YeMazororo: Payette Pamberi's iPhone Chipo Gwaro - Deals
iphone bhatiri rinofa nekukurumidza
unofanirwa kubhadhara icloud drive
maapplication anovhara pandinoavhura iwo iphone
iPhone Chipo Pfungwa YeMazororo: Payette Pamberi's iPhone Chipo Gwaro
Nguva dzezororo dzakatenderedza kona uye hauzive zvekutora kune vako vemhuri, shamwari, kana zvimwe zvakakosha. Isu takaunganidza ino gwaro rechipo kuti iwe ugone kuwana yakakwana chipo kune varidzi ve iPhone muhupenyu hwako. Heano mamwe makuru e iPhone zvipo mazano ezororo!
zvekuita kana ipad ikatadza kubatidza
Tinoda kuti iwe uzive kuti isu tinongokurudzira zvigadzirwa isu zvatinotenda chaizvo uye zvatinogona kumira kumashure. Isu takave neruzivo rwekutanga-ruoko nezvakawanda zvezvinhu izvi uye ndosaka isu takasununguka kuzvikurudzira kwauri!
Mazhinji akanakisa iPhone echipo mazano ndiwo madiki zvishongedzo akakosha kune varidzi ve iPhone. Heano zvimwe zvinhu zvidiki zvaunogona kuwana kuzadza iwo masokisi.
Wese Munhu Anoda Iyo 6 Tsoka iPhone Yekuchaja Cable
Imwe yeedu epamoyo iPhone echipo mazano ndeiyi yemhando yepamusoro, yakawedzera-kusimba 6-tsoka Mheni tambo . Iyi tambo inogadzira chipo chakakura kune wese munhu nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Inoita kuti ive yakapusa uye yakasununguka kune chero munhu kuti ashandise iPhone yake pamubhedha
Iyo yemhando yepamusoro uye yakasimba kupfuura tambo dzeApple
Iyo Apple MFi-yakasimbiswa, kusiyana netambo dzakachipa dzechiteshi chegesi dzinotyoka mushure mevhiki
MFi-yakasimbiswa zvinoreva kuti pane chip chidiki mukati mekambo iyo yakagadzirwa neApple. Kuchaja tambo pasina aya machipisi (iwo aunowanzo kuwana kunzvimbo yako yemagetsi gasi) kunogona kuva nenjodzi uye kazhinji kunotungamira kune inotyisa 'Ichi chishongedzo hachitsigirwi ne iPhone' yambiro. Kana yako tambo yekuchaja isiri MFI yakasimbiswa, inogona zvakare kupisa zvakanyanya kana, kazhinji, kumira kushanda mushure mevhiki.
Tora $ 10 Kubva MuPayette Pamberi Shopu
Iwe uchachengetedza $ 10 pakutenga kwako kwe $ 25 kana kupfuura kwenguva pfupi chete muPayette Forward Shop ine kodhi SAVE10FB . Ingoisa kodhi yacho pakubuda. Tora tambo uye homwe isina mvura iwe uripo!
Rangarira, iyo iPhone X uye iPhone 8 ndizvo inodzivirira mvura kusvika pakurova tsoka nhatu. Homwe yedu inokuramba wakachengeteka kusvika pamamita makumi matanhatu pakadzika (uye mune yakadzika magumo edziva).
Mhosva dze iPhone
Imwe huru yekuchengetera zvinhu yemushandisi we iPhone muhupenyu hwako inyaya nyowani! Mhosva dzinogona kubatsira kuchengeta yako iPhone iri-yepamusoro-chimiro, kunyangwe kana ukazviwisira netsaona kana kuirovera pamusuwo wemota, sezvandakaita nguva pfupi yadarika.
Mhosva yandinoshandisa pane yangu iPhone 7 uye zvizere kukurudzira ndeyeBaesan Air Cushion Shockproof kesi. Iyi kesi isingaremi yakagadzirirwa neairbag tekinoroji iyo inotora yakawanda yemhedzisiro kana iwe ukadonhedza yako iPhone. Zvakanakisisa pane zvese, iyi kesi inokwanisika - inodhura isingasviki $ 10 kana uine Amazon Prime.
Kana iwe uchida kushandisa mari yakati wandei, tinokurudzira zvikuru zviitiko naSpeck naOtterBox. Ose maviri emakambani aya anogadzira akawanda emhando yepamusoro makesi emhando dzose dzeiyo iPhone.
App Store & iTunes Chipo Kadhi
Haisi chokwadi chaizvo chekutora muridzi we iPhone iwe waunoziva? Wadii kuvatorera kadhi rechipo cheApp Store neTunes? NeApp Store & iTunes kadhi rechipo, unogona kutenga mimhanzi, maapplication, kurira, zviratidzo zveTV, mafirimu, uye nezvimwe! PaAmazon, unogona kutenga makadhi echipo anokosha pakati pe $ 25 - $ 200.
Yakakura iPhone Chipo Pfungwa
External iPhone Mabhatiri
Kana iwe kana mumwe munhu waunoziva achida kufamba zvakawanda, nhare mbozha ye iPhone inopa chipo chakanakisa. Neshaja isina waya, haufanire kuvimba nemashaja emadziro kana makomputa kuti ubhadhare iPhone yako. Kunyangwe iwe uri kukwira kukwira gomo kana kuona-kuona muguta nyowani, haufanire kunetseka nezve yako iPhone kupererwa nehupenyu hwebhatiri.
David Payette, Muvambi uye CEO wePayette Forward, anokurudzira Mophie Powerstation, bhatiri rekunze rinoenderana nechero smartphone. Anorishandisa kazhinji kana achifamba, kungave kuri bhizinesi kana kunakidzwa. Iri bhatiri rekunze rinochinjisa bhatiri rako re iPhone kana rePad nekukurumidza. Bhatiri pack racho pacharo rinowedzerwazve, uye iwe unogona kazhinji kuchaja yako iPhone kakati wandei usati woda kudzosera bhatiri pack.
Kana iwe uine mhuri hombe kana uchida kubhadharisa akawanda madhizaini panguva imwe chete, tinokurudzira iyo Anker PowerCore 26,000 mAh bhatiri rekunze. Iri bhatiri rekunze rine simba rine matatu emachiteshi eUSB, saka unogona kubhadharisa matatu matatu panguva imwe chete!
3 Muna 1 Kubhadharisa Deck Kune Ese Ako Apple Midziyo
Sevaridzi vezvizhinji zvigadzirwa zveApple, isu tinonyatsoda zano rekuve nenzvimbo imwechete kwatinogona kuchaja yedu iPhone, AirPods, uye Apple Watch. YoFeW Apple iWatch Stand inoenderana neese 3 Series eApple Watch, iPhone 5-8, iPhone SE, uye iPhone X. Iyi dhizaini inosanganisirawo tambo mbiri dzekuchaja uye dzinogona kuunganidzwa mumaminitsi asingasviki mashanu.
Kana mudiwa we iPhone waunoziva achifarira kuteerera mimhanzi, ungangoda kufunga nezvekuvatorera mutauri weBluetooth. Iwo akavakirwa-mukati ma iPhone masipika akanaka, asi isina waya mutauri inogona kutora yako yekuteerera ruzivo kune iyo nyowani nhanho.
Mumwe mutauri wandinogona kukurudzira zvikuru ndeye Bose SoundLink Bluetooth mutauri. Mumwe wevandaigara navo kukoreji aive nemutauri weBluetooth uye mhando yemutinhimira yaingoshamisa. Taishandisa kakawanda kumafaro uye pataitamba mitambo panze. Zvakare zvakare nyore kuti ubatanidze kune chero ako Apple zvigadzirwa sezvakaita yako iPhone, iPad, iPod, kana Mac.
Kana iwe uri kutsvaga sarudzo isingadhuri, iyo OontZ Angle 3 Inotakurika Bluetooth Mutauri isarudzo yakanaka. Uyu asingatauri mutauri ndeyeAmazon anotengesa zvakanyanya ane 4.5 nyeredzi chiyero kubva pamusoro peanopfuura makumi maviri nemaviri ekuongorora kwevatengi.
Apple payakatanga kubvisa headphone jack kubva ku iPhone 7 uye 7 Plus, zvakave pachena kuti mahedhifoni eBluetooth aive ramangwana rekuteerera mimhanzi pane ako maIOS. Tichifunga nezvekuti hapana headphone jack pane iyo iPhone 8, 8 Plus, kana X, inogona kunge iri nguva yekutenga peya yeBluetooth mahedhifoni kana iwe kana mumwe munhu waunoziva usati watova nekaviri.
Kana iwe kazhinji uchipfeka mahedhifoni paunenge uchishanda kunze, tinokurudzira iyo Zeus Wireless Bluetooth mahedhifoni. Aya mahedhifoni, ayo ane 4.5 nyeredzi chiyero paAmazon, iri ruzha kudzima uye isina mvura zvachose. Zvakanakisa pane zvese, aya mahedhifoni anodhura isingasviki madhora makumi matatu uye anouya newarandi yemakore maviri.
Ndingazvidembawo kusakurudzira AirPods, Apple nyowani isina waya EarPods yandinopfeka kujimu nguva dzese dzandinorovedza. Hunhu hwekunzwika pamwe chete neisina musono pairing kune Apple zvishandiso zvinoita kuti AirPods chipo chikuru zano kune vashandisi ve iPhone muhupenyu hwako.
Ongorora: Ita shuwa kuti iwe unotenga AirPods zvakananga kubva kuApple kana kune tech chitoro senge Best Buy. Mazhinji emaAirPods ari kutengeswa kuAmazon anodhura mazana maviri emadhora, nepo Apple neBest Buy ichingobhadharisa $ 159.99 yevaviri. Mitengo inoiswa mucherechedzo paAmazon nekuti maAirPod dzimwe nguva haasi kudura kuApple Store yako kana Best Buy.
Kana iwe uchitsvaga iwo maviri e studio mhando mahedhifoni, iyo goridhe zviyero pamusika ndeye Sony MDR7506 uye neBeats Solo3 Wireless mahedhifoni.
Unonzwa Une Rupo Chaizvoizvo Here? Chipo Iyo Nyowani iPhone!
Kana iwe uchida kuwana chimwe chinhu chakakosha chaizvo kune yako yemhuri nhengo kana shamwari, ungangoda kufunga nezve kuvawana imwe yePhones nyowani yakaziviswa neApple pane yavo ichangoburwa Apple Chiitiko munaGunyana 2017.
Kana iwe uine yekare iPhone, ungangoda kukwidziridza kune iyo iPhone SE . Izvo zvakachipa pane iyo iPhone 11 uye iPhone 12 uye kune mashoma mashoma shanduko kune yayo Hardware uye dhizaini.
Kana iwe uine iPhone 7 kana iPhone 8 uye uchida kukwidziridza, iwe ungangoda kuda kukwidziridza kune iyo iPhone 12 . Ngatitendesei - iyo iPhone SE chaizvo haina kumbosiyana neiyo iPhone 7 uye iPhone 8, saka unogona kuwana kukwidziridzwa kuve kunoodza moyo.
Kana Usina Chokwadi
Ndinoziva isu takambotaura nezvazvo zvisati zvaitika, asi tambo yemheni yemamita matanhatu ipfungwa yakanaka kune chero munhu uye wese munhu ane iPhone, iPad, kana iPod. Kana iwe usina chokwadi nezve izvo zvavachada, iwe haugone kukanganisa pamwe netambo.
Isu tinovimba yedu yezororo chipo chinongedzo chakubatsira iwe kuti uuye neinotyisa iPhone chipo mazano kune shamwari dzako uye mhuri. Kana iwe ukawana mutungamiri wedu achibatsira, tinotarisira kuti iwe ugozvigovana pasocial media!